2019 #NABShow လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူသိပ်သည်းသော, အထဲကကိုသတိရနေတယ်မနေပါနဲ့! NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - - အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်းများ
Home » အသားပေး » 2019 #NABShow လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူသိပ်သည်းသော, အထဲကကိုသတိရနေတယ်မနေပါနဲ့!
အဆိုပါ 2019 #NABShowအပေါ်ကျင်းပ ဧပြီလ 6th-11th, စီမံခန့်ခွဲဖန်တီးသောသူပညာရှင်များအဘို့အကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနှင့်ကုန်စည်ပြပွဲဖြစ်ပြီး, အားလုံးပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးဖျော်ဖြေရေးဖြန့်ဝေခြင်း, ကျော်ကြားကို Creative မာစတာစီးရီး hosting အဖြစ်တစ်ပင်မအဆင့် session တစ်ခုနဲ့ content ဖန်တီးသူများအတွက်အထူးအစီအစဉ်များပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါဇာတ်လမ်းပြောပြဖြစ်စဉ်ကို reinventing ဖြစ်ကြောင်းနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်နည်းစနစ်သို့သီးသန့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၏မျှဝေခြင်း။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေးအပ်ဒီနှစ်ပေါင်းကြီးတွေပြပွဲကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပြုသောပူဇော်သက္ကာထဲကတစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါနှစ်ပတ်လည် ကို Creative မာစတာစီးရီး, ဧပြီလ 7-8, အလိုတော်ယနေ့အများဆုံးဆန်းသစ်နှင့်လူကြိုက်များ feature ကိုရုပ်ရှင်များအတွက်တာဝန်ရှိသည့်ဖန်တီးမှုများနှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းနှင့်အတူနောက်ကွယ်မှတက်ရောက်ကြာပါသည်။ , အစုံအပေါ်ဂိမ်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့ရူပဒီဇိုင်းရှုပ်ထွေးရိုက်ချက်များကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာစိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်းရေးအပေါ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ပြပွဲပြေးသမားရှယ်ယာကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များ။
အဆိုပါကို Creative မာစတာစီးရီး "နဲ့ပယ်ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးကဂလိုဘယ်ကြည့်ရန်: ကိုဘယ်လိုထူးထူးအထွေထွေရှိငြားသင်္ဘောသားတစ်ဦးသက်ရောက်မှုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း"ပေါ် တနင်္ဂနွေ, ဧပြီ 7။ အဲဒီ session အတွေ့အကြုံကိုဇာတ်လမ်းပြောပြအတွက် Cross-ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်စားပြုမှုနှင့်မည်သို့မတူကွဲပြားမှုအစုအပေါ်ကျနော်တို့အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ရန်လမ်းကိုပြောင်းလဲနေပါတယ်၏သက်ရောက်မှုအားဆွေးနွေးရန်မည်သူကိုနိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်တစ်လျှောက်အလုပ်လုပ်နှင့်အတူရှေ့ဆောင်ရိုက်ကူးရေးတစ် panel က feature ပါလိမ့်မယ်။
တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 8"အတူစတင်မည်အဆိုပါပင့်ကူအခနျးငယျအတှငျးတည်းဖြတ်ခြင်း"အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ရုံအယ်ဒီတာများ (ACE အား) နဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အော်စကာအနိုင်ရညွှန်ကြားရေးမှူးပတေရုသရမ်းဆေး, ဆုရအယ်ဒီတာရောဘတ် Fisher ကဂျူနီယာနှင့်ပထမဦးဆုံးလက်ထောက်အယ်ဒီတာစာရာကိုးလ်အဆိုပါတွေနဲ့စကားပြောပါလိမ့်မယ် ဟောလိဝုဒ် သတင်းထောက်ရဲ့ Carolyn Giardina အဆိုပါဖန်တီးခြင်းအတွက်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်"Spider-Man: အပင့်ကူအခနျးငယျထဲသို့။ " -winning
Motion Picture နှင့်အသံအယ်ဒီတာများ (MPSE), အဲဒီ session "နဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်'' ဗိုလ်ကြီးအံ့ဩခြင်း ': တစ်ဦးအမျိုးသမီးထိပ်တန်းသူရဲကောင်းပုံပြင်၏လုပ်ခြင်း"ဟုအဆိုပါ Blockbuster ရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှုပ်ထွေးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ဆွေးနွေးမှု feature ပါလိမ့်မယ်။ Colorist Doug အန်တိုနီ, ILM Visual Effects ကြီးကြပ်ရေးမှူး Craig Hammack နှင့်အသံ Editor ကို Gwendolyn Yates Whittle, အဓိကအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု element တွေကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုတဲ့နည်းပညာတွေဝေမျှအသံနဲ့ရုပျပုံပေါင်းစည်းနှင့်အော်ဂဲနစ်နှင့်မှတ်သားသိနိုင်ရုပ်ပြစာအုပ်ပေါင်းကူးလိမ့်မယ်ကြီးကြပ်အဆိုပါများအတွက်စုစည်းရူပါရုံကိုတည်ဆောက်ရန်ကြည့်ကြီးကြပ်အကြီးတန်း ရုပ်ပုံ။
အဲဒီ session "မဿဲ Libatique, ASC: Close ကို-up,"တနင်္လာနေ့ဧပြီလ 8th အပေါ်အရပျကိုယူပြီး, အလင်းရောင်, အရောင်နဲ့ကင်မရာလှုပ်ရှားမှုမှ Libatique ရဲ့ထူးခြားတဲ့ချဉ်းကပ်မှုအကြောင်းကိုဟု ICG ပြောမဂ္ဂဇင်းအမှုဆောင်အယ်ဒီတာဒါဝိဒ်သည် Geffner နှင့်အတူစကားလက်ဆုံအတွက် Two-အချိန်အော်စကာဆန်ခါတင် feature ပါလိမ့်မယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရိုက်ကူးရေးအစည်းအရုံး (ICG) နဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်, အဲဒီ session "Iron Man" နှင့် "က Black Swan" တစ်ဦးကစတား, မွေးဖွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် "အပါအဝင်အလုပ်၏ဓာတ်ပုံရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဒါရိုက်တာသို့ delve ပါလိမ့်မယ်။ "
"အဲဒီ session အတူပင်မအဆင့်ပေါ် ASC ရဲ့ 100th နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုလက်လွတ်မနေပါနဲ့အပြည့်အဝစက်ဝိုင်း - အတိလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ရုပ်ရှင်"ပေါ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 10။ စက်မှုလုပ်ငန်းတော်လှန်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နည်းပညာဖြစ်ကြောင်းသစ်ကိုကိရိယာများနှင့်နည်းစနစ်လက်ခံစဉ်ဟောပြော, ရုပ်ရှင်ပညာ၏ဖြစ်ပေါ်နေသောပြည်နယ်ဆှေးနှေးကွမညျနှင့်မည်သို့အကောင်းဆုံးအနုပညာများ၏သမိုင်းအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်။
As ယခင်ကကြေညာခဲ့သည်တစ် Feather (BoF) အစီအစဉ်၏အသစ်အ Birds ဂိမ်းရှစ်ဖိုရမ်များတစ်စီးရီးမှတဆင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအကြောင်းအရာများဆွေးနွေးရန်အတူတကွဘာသာရပ်ကိစ္စကျွမ်းကျင်သူများ, ဖန်တီးမှုများနည်းပညာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသမားတွေဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ ဒါ့အပြင်ဒီနှစ်မှာဖွင့် NAB ပြရန်, အ Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလားပြောရမှာ အော်စကာဆုကို-အနိုင်ရအယ်ဒီတာဝီလျံ Goldberg က feature ပါလိမ့်မယ်။
တစ်အပြည့်အဝ lineup NAB ပြရန် အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်တာဝန်ယူထားသောရာပူဇော်သက္ကာကိုတွေ့နိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး post ကိုထုတ်လုပ်မှု	2019-04-02
ယခင်: တီဗီသတင်းသတင်းထောက် presentation-Anchor & စီးပွားရေးမိတ်ဖက်
နောက်တစ်ခု: DoPchoice မိတ်ဆက်ခြင်းရဲ့နောက်ထပ်အလင်း Shapers & Honeycomb SNAPGRIDs Booth C9945 အတွက် NAB မှာကအားလုံးကိုကြည့်ရှုပါ